Kukhona umuzwa ezingeke kudidaniswe yimuphi omunye, isibonelo: intukuthelo, umona, inzondo, ukuhaha, njll Ngubani uthando, iphi umugqa iyahlule uthando evamile noma uthando? Kanjani hhayi ukuthi usephutheni ekukhetheni umlingani, ukuze emva Uphatheke kabi hhayi udumazeke empilweni yami isikhathi eside ngisho abacindezela ucabangana komngane entsha nabobulili obuhlukile? Good ukwazi lover wakhe ukusiza ubuhlobo kaPlato, ngeshwa, ezimweni eziningi, walahlekelwa ukuhlobana yayo yangaphambili. Kodwa, njengoba isisho, zonke ezinhle ngokulinganisela ...
Intsha Cha khohlakala isikhathi samanje ukuyekelela, uhlangabezana umuzwa wokuqala kakhulu uthando, isikhathi esiningi azisebenzi ngoba ukuthuthukiswa ngokushesha kule noveli, ngoba abaningi babo nje asazi ukuthi baziphathe kanjani esimweni esithile. Ngokuvamile ngalesi yobudala futhi ubuhlobo kaPlato, futhi kubonakala ukuthi ingaba yiqiniso. Njengomthetho, lutho okuhle is etholakala ekuqaleni ubuhlobo bobulili. Konke kunesikhathi. Futhi uma ufika uthando kuqala, khona-ke konke kufanele niqhubeke njengenjwayelo. Futhi lokhu shazi ngokudlulisa amehlo kanye touch unamahloni, kusukela abanhliziyo ngokoqobo kuzuba aphume esifubeni, nakho-ukuhlupheka. Indlela ukuthi iyiphi kungcono - lapho umuzwa sokuqala mutual, futhi ungenza eziningi kangaka izinto oyisiphukuphuku noma efuna ngiyinake ngokuphelele, okuvumela ukwazi ubuhlobo okumsulwa kaPlato. Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi into ukububula futhi ingakuqapheli imizwa kwabheduka maqondana uqobo. Kuzame futhi kubuhlungu, kanye amnandi futhi kubuhlungu futhi unomoya omuhle, kodwa uthando unrequited uyakwazi ukuvikela ukukhulelwa ekuqaleni nezinye nesimilo esixegayo, njengoba sezikhulile, uhlangabezana umuzwa wokuqala enamandla, akakwazi ukuzibamba futhi, echibini nekhanda lakhe bacwilisa ku kwamehlela passion yabo.
Nokho kwenzeka kanjalo, lapho umngane noma umngane owayo uthandana oyikhethile esisodwa engu ovuthiwe. Esimweni lapho ubungane bangempela, ngothando akukuniki ngisho uhlobo ngasese uhlangabezana agubhayo kungalindelekile uzizwa. Ubuhlobo kaPlato futhi ibuhlungu ngempela:
"... kunkosikazi wakho - amehlo,
Futhi akukho izindebe - izindebe.
Ngiyakuthanda kakhulu kuwe,
Kodwa ngaphambi ehlanzekile wakhe ... ".
Esimweni esinjalo, umuntu wonke amandla osebenza ku ezosusa inhliziyo yami ukuba axazulule othandweni lwakhe, ukuze singathwesi ibange inkathazo noma isoka lakho / intombi, noma wakhe / omunye wakhe amthandayo, yena / yona uzama, ngangokusemandleni ukuhlangana nawe, kanti uma kungenjalo iya kwelinye idolobha.
Kungcono ukuthi akudingeki ukuba siyabhekana nemizwa enjalo, ngoba ukuba nobuhlobo obungathi sina - kuba ukuqonda nokuhloniphana, futhi nobudlelwane bezocansi enempilo. Imindeni kumele wadala ngoba eshukunyiswa uthando ehilela ukuzala. ukuphila komkhaya kujabulise - iyona harmonic ezingokomoya nezingokwenyama ubuhlobo abalingani, okusekelwe othandweni ezazinalo, obakhathalelayo nomunye futhi esizukulwaneni esisha.
Ungakhohlwa ukuthi izingane zethu zivame ukukhululeka ukwakha ukuphila kwabo ngemibono wadala of ubudlelwano sabazali. Yingakho kufanele Ningafungeli phambi kwabo. Kuyacaca ukuthi ubuhlobo bothando nobuhlala njalo bushelelezi, lapho bonke idlule indlela olunameva ekuqaleni ukuphila ndawonye. Phakathi okuthiwa "ethi awafike" izinhlamvu nje kudingeka ukusinda. Lapho abantu ababili abanothando uqale ukufunga (futhi ngaphandle akunakwenzeka ukuba aphile impilo), kuba okokuqala kudingekile ukuthuthukisa uhlobo nenhlonipho ku izingxabano emndenini, ukuya ngale kwemikhawulo okufanele kube impermissible ngokuphelele. Uhloniphe isithunzi sabo, bona kuphambuke komunye nomunye, ungathola njalo ukusilela, futhi phakathi neminyaka engu esidlule, bonke ukuxabana ngokuhlanganyela ngokuya "cha". Kodwa uma kuziwa emikhayeni enjalo, owakwakhe abaye baphila isikhathi eside, baqonde nomunye okungaka shazi - poluvzglyada, futhi ziyajabula ngempela.